पिठ्युँ तथा गर्धनको पीडा - स्वास्थ्य जानकारी - नारी
पिठ्युँ तथा गर्धनको पीडा
डा.पंकज जालान, स्नायु रोग विशेषज्ञ, नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल
३५ वर्षीया उर्मिला केसी कामकाजी महिला हुन् । कुर्सीमा बसेर काम गर्दा उनको पिठ्युँ दुख्न थालेको छ । यसैगरी ४५ वर्षीया आशालाई पनि हिजोआज टेलिभिजन हेर्दा गर्धन दुख्छ । महिलाहरूलाई बढी मात्रामा पिठ्युँ तथा गर्धन दुख्ने समस्या हुने गरेको छ । नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलका स्नायु रोग विशेषज्ञ डा. पंकज जालानका अनुसार २०–२५ वर्षको उमेरपछि बिस्तारै ढाडको हड्डी खिइन थाल्छ ।
निहुरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो । बालबालिकाहरूको स्याहार, घर अनि अफिसको काम आदि जिम्मेवारी पूरा गर्ने महिलामा यो समस्या अझ बढी देखा पर्छ ।
कसरी छुटकारा पाउने ?
पिठ्युँ दुख्ने समस्याबाट मुक्तिका लागि बस्दा सोझो बस्ने । पिठ्युँलाई सपोर्ट दिने ।
अडेस लगाएर बस्ने ।
कुर्सीमा लगातार बसेर काम गर्नुपरे बेला–बेलामा ब्रेक लिने ।
गर्‍हुंगा सामान नबोक्ने ।
टेलिभिजन हेर्दा, कम्प्युटर तथा ल्यापटपमा काम गर्दा गर्धनको पीडासम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
गर्धनलाई न्युट्रल राख्नुपर्छ ।
अग्लो सिरानीको साटो पातलो तथा नरम सिरानी प्रयोग गर्नुपर्छ ।
पिठ्युँ तथा गर्धनको पीडाबाट हातखुट्टामा असर पर्न सक्छ । त्यसबाट हातखुट्टाको नसा च्यापिने, झमझम गर्नेजस्ता समस्या उत्पन्न हुन्छन् । त्यसैले समयमै चिकित्सकको सहयोग लिनुपर्छ ।
आश्विन २०, २०७३ - छुट तथा सेल